Welded Steel Pipe Production Line, Cold Roll akpụ Line - Teneng
Slitting & Cut to Ogologo Ogologo
Automatic Steel Pipe bundling & mbukota Machine
Igwe eji arụ ọrụ ERW355
CS127 Igwe igwe igwe na -ajụ oyi
Slitting igwe maka ígwè eriri igwe
Igwe Tube Bundling Steel
Stacker nke Steel Tube
Igwe eji akpukpo ọkpọ akpaka zuru oke
CS165 Nzuzo hụrụ igwe maka ERW tube igwe igwe
Full akpaka ígwè anwụrụ bundling & packi ...
Carbon Steel ERW Steel welded Pipe igwe tube ...
HSS Igwe igwe oyi eji igwe igwe ihe ERW Tube
Akwa ugboro HG219 welded steel tube mill
Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma na kredit ka anyị nwee ike melite ọtụtụ alaka ụlọ ọrụ na ndị nkesa na mba anyị.
Anyị na -anọgidesi ike n'omume ngwaahịa ma na -ejikwa usoro nrụpụta, na -agba mbọ imepụta ụdị niile.
Ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara n'ịrụpụta akụrụngwa arụmọrụ dị elu, ike teknụzụ siri ike, ike mmepe siri ike, ọrụ nka dị mma.
Ma ọ bụ ire ere ma ọ bụ ire ahịa, anyị ga-enye gị ọrụ kacha mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
Shijiazhuang Teneng Ọdụdọ & Mechanical Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke welded ígwè anwụrụ mmepụta akara, oyi mpịakọta akpụ akara, slitting akara, bee-to-ogologo akara na yiri inyeaka akụrụngwa. Ụlọ ọrụ Teneng bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke nwere ike nyocha na mmepe, imepụta na ire ahịa. Teneng bụ onye otu kansụl nke China Roll Forming Association, onye isi oche nke Hebei Steel Tube Trade Association.
Igwe Teneng bụ akụrụngwa nrụpụta ọkpọ kacha arụ ọrụ dị n'ụwa. Na China, ndị ọrụ ama ama bụ Hebei Jingye Group, SANY Group, China Shipbuilding Industry Corporation
Tube Mills & mpịakọta akpụ ahịrị
Ngwa igwe ihe na mpịakọta kpụrụ ahịrị na -ejikọ ọnụ eke. Ya mere, na -akpụ ahịrị na -akpụ ahịrị na igwe igwe nri. Nsonaazụ ozugbo ịtụle isiokwu ndị a maara nke ọma n'usoro nke ọzọ bụ ngbanwe dị mkpa: na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na ụdị ngwaahịa agbanwegharịrị n'ụdị nchekwa ụwa na ọnụ ụzọ ...
Ngwongwo igwe na-akpụ akpụ, ihe eji eme ihe na oke nha na ezigbo ụkpụrụ
Ngwa igwe eji akpụ nchara, nke nwere ike ịdị na ya? Ngwa igwe eji akpụ nchara, nke a na-eji emepụta igwe siri ike, ụdị igwe. N'ime akụrụngwa, n'ozuzu, a na -eji akwa nchara na -ekpo ọkụ ma ọ bụ oyi akpọrepu dị ka akwụkwọ akụkọ, na -ehulata na arụmọrụ ndị ọzọ iji nweta co ...
Ogwe ọkpọkọ ogologo kwụụrụ ogologo nke usoro mmepụta bụ gịnị?
Usoro mmepụta igwe ịgbado ọkụ ogologo dị mfe, arụmọrụ dị elu, ọnụ ala yana mmepe ngwa ngwa. Ike nke ọkpọkọ welded gburugburu na -adịkarị elu karịa ọkpọkọ ọkpọkọ kwụ ọtọ, enwere ike iji ọkpọ ahụ mepụta ọkpọkọ welded buru ibu nwere oghere pere mpe, mana ...